Qaphela Ukubuyisela, Uhlobo olutsha lweBotnet - I-Semalt Expert
I-Botnets ibambelele kwisigidi seekhompyutheni kunye nezixhobo zeselula, kwaye zisakhula kwinani. Abahlalutyi bezokhuseleko baye bakhupha isilumkiso esinzulu malunga nebhokisi elitsha elibizwa ngokuba yiReaper. Kuqikelelwe ukuba yi-cyber ephazamisayo ephazamisa iinkonzo ze-intanethi kunye nezixhobo ezininzi kwihlabathi jikelele. Into ebaluleke kakhulu kukuba le nto ingafakwa kwikhompyutheni yakho ngaphandle kolwazi lwakho - jollibean logo creator. UJack Miller, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko kuMphathi weNtengo, uthe ufikelele kwiinkqubo ezifana nezi-routers, ii-smartphones kunye nabanye kwaye ziyingozi.
I-botnet iyimqoqo enkulu ye-intanethi, iifayile ezinobungozi ezilawulwa yikhomputha ephakathi. Ngokusemgangathweni, kulungile ngaphandle kokuba kuhlanganiswa inani elikhulu leekhomputer, ii-routers, iipilisi, kunye ne-smartphones kwaye zichaphazela izixhobo ezintsha kunye ne-malware kunye ne-virus. Enye yezona ndawo zikhohlakeleyo kukuba abasebenzisi abazi ukuba izixhobo zabo zitheleleke ngama-botnets, njengoko le malware isebenza ngokukhawuleza isebenze izinto ezingenanto.
Ii-Botnets zisetyenziselwa ukuhlawula kunye nokujolisa kwiinkonzo ze-intanethi, ezifana ne-DDOS (Ukuhanjiswa kweNkonzo yeeNkonzo). Iingcamango ezinokuthi zikhuphe iikhompyutheni zazo, kulula ukuba ugaxekile ukuba akhombe idatha yakho eyona nto. Into ebaluleke kakhulu kukuba ama-cybercriminals enza iibhokethi kwaye ayithengise kubathengi abasebenzisa ukwenza i-cybercrime emhlabeni wonke.
Kwiinyanga ezimbalwa ezedlulileyo, i-Boti botnet yabangela ukuphazamiseka okukhulu kwi-United States kunye neenqwelo zokuhamba. Ixhaphaze ezinye izinto ezikhuselekileyo kwizicwangciso zezokhuseleko, kwaye i-vulnerable best is Reaper.
I-Reaper iyakwazi ukululawula indlela eya kwiikhomputha kunye nezixhobo eziphathekayo ezininzi kwaye ibeka ingozi enkulu kunokuba ibengaphambi kwayo. Abahlalutyi bezokhuseleko bazisa ingxaki ebantwini njengoko befuna ukuzisa bonke abantu ngebhokisi enokuthelela ii-routers ezininzi kwihlabathi.
Iqela libone ukwanda kwimizamo yokungena kwi-IOT IPS ukukhusela, kwaye isilinganiselo saloo nto ithathwa ngokubakho kwangexesha. Imibutho engaphezu kwezigidi ezimbini ikhononda ngezixhobo ezinegciwane e-Australia nase-United States. Iqela lophando licebise ukuba iziphepho ze-cyber ezilandelayo ziza kuza.
Indlela yokumisa ukubuyisela ekuthinteleleni isixhobo sakho?
Ukususela ngoku ngoku, zonke izifo ezichaphazelekayo eziHlanganisiweyo nokuPhinda zikhawulelwe kwii-routers kunye neekhamera ezisekelwe kwi-intanethi. Nangona kunjalo, kufuneka ufakele inkqubo yokulwa ne-malware kwikhompyutheni yakho okanye kwisistim ephathekayo ukukhusela idivayisi yakho kuyo. Ii-Mac kunye nee-PC zihlaselwa kakhulu kulolu hlobo lwe-malware, ngoko kufuneka uzame BitDefender. I-Android kunye nabasebenzisi beetekisi banokuthintela amadivayisi abo afake isofthiwe efanelekileyo.